China 1050 Aluminum Circle Manufacturer - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
Ny 1050 Aluminium Circle dia legioma mifototra amin'ny alim-pandihizana ao amin'ny fianakaviana "komandy tsotra" (1000 na 1xxx). Amin'ny maha-orinasa azy, dia tsy ampiasaina amin'ny fanonganana. 1050 O Fitaovana aluminium O dia ampiasaina betsaka ho an'ny fitaovana fikarakarana sakafo.
Miaraka amin'ny fanampian'ny ekipa manam-pahaizana manokana, dia mikasa ny hanamboatra sy hanolotra faran'ny Aluminium Circle. Ny toetra amam-boninahitra aluminium (na tarehimarika miovaova) dia mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny fampiasana amin'ny tsenambola maromaro, anisan'izany ny indostrian'ny cookie, automotive and lighting. Ny tolotra Industrial Aluminum Circle dia novolavolaina tamin'ny fampiasana teknolojia avo lenta sy fitaovana avo lenta tsara indrindra amin'ny fanarahan-dàlana amin'ny fenitra indostrialy efa voafaritra. Afaka manararaotra ireo faribolana Aluminium Indonezika ireo ny mpanjifa araka ny filazan'izy ireo, amin'ny vidiny mahasoa. Ny Aluminium Circle / Disc dia ampiasaina amin'ny fampiasana ara-barotra sy indostria ankapobeny, toy ny trondro capacitor, trondro dendrette, ...
Famaritana: Aza afoy amin'ny alikaola, dendrina, fampidiran-danja, scratches, tain-koditra, fanodinana oksoloro, fihenam-bidy, korrosina, marika fingotra, dona mivatravatra ary kilemaina hafa izay hisakanana ny fampiasana. Aluminium Disc-Sheet tsy misy loko mainty, mofomamy madinidra, tavy peryzika, fanodidinan'ny milina fanontam-pirinty, toy ny gko interne Control hafa. Ny alim-by Aluminium dia ampiasaina betsaka amin'ny elektronika, entana, fanafody, fiara mandeha amin'ny ordinatera, fitaovan'ny fitaovam-pifandraisana, famokarana fiara, fanodinana, fanorenana ary fanontana, indrindra ho an'ny cookware, toy ny penso tsy misy kitapo, hodi-doko ary fitaovana, toy ny lampshade, ny mokoko. Ny ala manodidina ny alim-borona dia ny vokatra manjavozavo indrindra amin'ny alàlan'ny fanoratana aluminium. 1100-0 dia ampiasaina voalohany indrindra ...
Famaritana: Ny alim-borona dia ampiasaina amin'ny fanaovana haavo, toy ny non-stick pan, fitaovana fandefasana fitaovana, fitaovana fiompiana ary fitaovana fanenomana sy ny sisa. Ny alim-borona Aluminium no vokatra be dia be ampiasaina, ny tanjaka mahery, ny fivalanana tsara, ny kalitaon'ny Anodized sy ny kalitaon'ny rano lalina izay mety ho an'ny cookware ihany koa. 1. Fihetseham-po sy tanjaka mahery vaika; 2. Ny fahombiazan'ny fitantanana dia tsara, mametaka, manamboatra ny haavony; 3. Fiatoana amin'ny angovo, fiarovan'ny hydrogène, fiarovan'ny fanoherana sy ny fahasitranana; 4. Amboarina plastika, fitondran-tena ary fitondran-tena fitaratra; 5. Mora mandray ny karazana fanodikodinana fanerena sy fanitarana, mandondona; 1) A1050, A1100, A1150, A1200 - Utensil, ...
Description: 1. General Description 1100 1050 3003 5052 mafana nanakodia cookware aluminium Discs, hatevin'ny no fanalahidin'ny kalitaon'ny Aluminum no tena zavatra mahazatra ny cookware, tahaka ny ho mpitarika tsara ny hafanana ary tsy lafo raha oharina amin'ny varahina na vy Stainless. Na dia zava-dehibe aza ny singa toy ny departemanta, ny manasongadina sy ny vita, ny elanelana no singa manan-danja amin'ny kalitao. Ny latsa-dranomaso, ny tsaratsara kokoa ny fiparitahan'ny hafanana, izay mampihena ny fahafahan'ny "toerana mafana" mitranga. Tadidio, satria aluminio ny alimine rehetra, miely patrana ny hafanana eo amin'ny tontonana manontolo, anisan'izany ny rindrina boribory. Traditional stainless ...
Famaritana: Ny anarana lehibe indrindra amin'ny indostria, isika dia voafatotra amin'ny fanomezana faran'ny Aluminum Circles ho an'ireo mpanjifanay manana voninahitra. Ny vokatra azonay dia novolavolain-dry zareo matihanina mampiasa teknika fohy sy fitaovana tsara indrindra azo avy amin'ny mpivarotra azo itokisana. Noho ny fangatahana avo lenta, ny vokatra azonay dia misy amin'ny fomba maro samihafa. 1. Information General Circle dia eo anelanelan'ny 0.50 mm sy 6.00mm amin'ny haavony ary manana karazana fampiasana isan-karazany ao amin'ny kitapo sy ny lakozia, anisan'izany ny fitaterana fako sy ny fitaovana fanenomana. CC circle dia tsara ho an'ny spinning, dikany lalina (lalina noho ny 10 cm), loko ...
Description: 1. Ny fampiasana ny sary sokitra sy ny fanaovana cookwares 2. Alloy: 3003 3. Temper: O H12 H14 H16 H18 sy Etc. 4. Ampidiro: 50mm - 1600mm 5. Fanitsiana eo ambony: miorina 6. Fitaovana: kilaometatra vita amin'ny kilaometatra miloko mavo sy matevina. Packing: EPE napetraka ary ao anaty boaty hazo Shuanglin Jiate dia manasokajy amin'ny famokarana rakikira Aluminium avo lenta miaraka amin'ny haavony avo lenta sy farafahabato farafahakeliny farafahakeliny azo ampiasaina amin'ny fampiasana amin'ny semiconductor, ny fandrakofam-bozaka simika (CVD) ary ny fampisehoana ara-batana (PVD) . Ny haben'ny horonan-tserasera dia ny 7 "amin'ny 1" ary ny ...
Famaritana: Manamboatra sy manome ny Aluminium Circle ao Shina ho an'ny mpanjifantsika. Izy ireo dia atolotra amin'ny hateviny isan-karazany, manodina, lava, sakany ary dimanjato mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa. Ny alim-pitaratra tsara indrindra dia ampiasaina amin'ny fomba famokarana izay mamaritra ny toetra mampiavaka ny singa simika. Isika no iray amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy tsara indrindra amin'ny faritra manodidina an'i Aluminium. Ireo dia natao amin'ny alim-baventy avo lenta mba hahazoana antoka ny faharetana. Ny saran-dalana nomena dia fantatra tsara mba hanomezana fahombiazana bebe kokoa na dia lava be aza. Vita amin'ny fampiasana teknolojia avo lenta ny famokarana, manome alimanitra manokana an'ny Aluminium ...
Description: ara-barotra madio aluminium (1000-andian-dahatsoratra aluminium, izay 99.9% + madio) no manana ny ambony indrindra ny mafana conductivity rehetra aluminium alloys, fa noho ny "voasary Peel vokany" izay nampikambana madio aluminium dia afaka hanangana mikitoatoana sy tandavan mitovy amin'ny voasary peels Noho ny natioran'ny voamaina, tsy azo ampiasaina ny mampiasa aluminium madio ho toy ny fototry ny fitaovana enti-matavy (mpividy vitsivitsy no manaiky ny mofomamy mafana). Noho izany, amin'ny ankapobeny dia ho hitanao ny fanorenana tahaka izao: ny vy tsy misy ravina, ny alim-bovoka vita amin'ny alimo madio, ny foiben'ny 3003 na ny 3004 aluminium, ny endri-tsoratry ny fifandraisana ...
Izahay dia mpanamboatra siramamy amin'ny alim-bary misy alim-bary 200-300Tons isam-bolana. Ny tsena lehibe ho an'ny faribolan'ny alimo dia ny Afovoany Atsinanana, Azia atsimo atsinanana, Afrika ary Amerika Atsimo. Ny faribolan'ny alim-bary dia ankasitrahana ary mahafeno fepetra ho an'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao. Noho ny fanampian'ny matihanina manam-pahaizana, afaka nanamboatra, nanome ary manondrana alim-borona tsara tarehy. Ny faribolan'ny alim-bary natolotr'i antsika dia nanamboatra aluminium avo lenta sy avo lenta mba hitoetra ho tandindomin-doza miaraka amin'ny fenitra sy rafitra indostrialy. Amin'ny alàlan'ny endri-javatra toy ny faharetany, ireo alim-by Aluminium ireo dia ...
Famaritana: Ireo kodiarana alikaola mivezivezy / miloko marevaka dia ampiasaina amin'ny tranokely toy ny latabatra. Fa ny ankamaroan'ny kodiarana Aluminium dia nangataka ny Deep Drawing Quality Aluminum Circle. Ireo faribolan'ny alim-bary dia ampiasaina betsaka ao amin'ny kitchenware, cookware, reflector-light sns. Aluminum Circle Features: 1. Fifandimbiasam-pamokarana betsaka amin'ny lanjan'ny sokajy, ao anatin'izany ny endrika sy ny endriny; 2. Sary manintona lalina sy manatsara ny kalitao; 3. RoHS sy ny fankatoavana ny REACH. Ny toetoetran'ny alim-bary (aluminium) ho an'ny vilany, sns., Ny kodiarana alim-bary tsy misy kofehy (na endrika boribory) dia mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny fampiasana amin'ny tsenambola maromaro, toy ny fitaovana fikarakarana cookie, automotive and lighting etc Key Features 1 ...
Quick Details Grade: 1000 Series Misafoaka: O-H112 Type: Plate Fampiharana: Cookware hateviny: 0.2mm-150mm Ambainy: Customer Fepetra tena toetrany Fitsaboana: mifono firaka na tsia: Moa firaka Model Number: 1050 / 1060 / 1100 / 3003 / 5052 Name: CC quality Aluminium cirque Surface: Smooth Color: Silvery Certification: ISO9001 Material: Aluminum Alloy Metal Shape: Round Circle Alloy: 1050 / 1060 / 1100 / 3003 / 5005 / 5052 / 5083 / 3005 Standard: GB / T 8011-3190 MOQ : 2008 Tons Sample: Avileable Aluminum Circle / Disc dia ampiasaina amin'ny fampiasana ara-barotra sy indostria ankapobeny, toy ny capacitorcase, trondro dendritra, tobim-pitsaboana, kitapo fikarakarana, tavoahangy tavoahangy, trondro kosmetika ary trondro fantsona glanga. Ny volavolan-dalampanorenana na ny famolahana hotifirina dia toy ny varo-maitso, mandeha ...
Aluminium disc Surface Finish: Leaf en rustig, met geen rijden, lucht geurigd om niet te rusten van White. Smoem, helder, geen zone van kwaliteit, geen scratched, geen oog slagge kwaliteit van materiellen: tot tot tot tot gratis uitgave van de defekten zoals witte rust, , Mandrosoa maranitra, Fandrobona moramora, Camber, Dents, Tora-bato, Break Lines, Scratches ary maimaim-poana amin'ny kofehy napetraka. Manana laza tsara eo amin'ny mpanjifantsika isika amin'ny faran'ny aliminioma misy kalitao avo lenta sy mifaninana, mandresy fankasitrahana avy amin'ireo mpanjifantsika miaraka amin'ny sambo tsara indrindra sy ny fahaiza-manao matihanina. Ny kalitao dia mifanaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001. Izy io dia fitaovana amin'ny milomano 5 marefo ...
1050 1100 Fanolorana kodiarana Aluminium Circle For Household Utensils / Enamelling
Ambony tora-tava: Miboridana tsara sy tsy miolakolaka, tsy misy randrana fivoahana, kely solika mba hisorohana ny fotsy 1. Alloy: 1050, 1060, 1070, 1100, 3003 2. Temper: O, H12, H14 3. Fahatelo: 0.36 ~ 10mm 4. Ampidiro: 90-1200mm 5. Package: standard ny fanondranana, mandrakotra papier mainty sy sarimihetsika plastika avy eo napetraka amin'ny raharaha hazo / palette 6. Fepetra takiana: T / T, tsy mendrika ny L / C amin'ny fahitana 7. Fotoana fohy: ao anatin'ny andro 30 Fampiasana: alim-bary ho an'ny cooker, frypan, reflector ny hazavana, sns. Smooth, Brightly, No Zone of Broken, No Scratched, No Oil Sludge Quality of Material: Totally free from defects like White Rust, Oil Ny pataloha, ny fametahana, ny fahavoazana amin'ny sisiny, ny kamera, ny dendrina, ...
1050 1060 1100 3003 Taratasy vita amin'ny alim-borona vita amin'ny alimentaire ho an'ny fitaovana fikarakarana sakafo
Ny fampiharana ny aliminioma dia mpamokatra aluminium madio ary ampiasaina amin'ny cookware sy engineering, toy ny mahandro sakafo, tanjona mazava, kojakoja, frypan, tavoahangy, ketla, reflexoran'ny hazavana, sns. Ny sary hosodoko sy ny endriky ny fanamafisana sarobidy Aluminum Circle Sheet dia azo omena. Ny Circumference Aluminium dia ny RoHS ary ny fanarahan-dalàna REACH ary ampiasaina amin'ny famokarana voaaro tsara. Ny faribolantsika dia fitaovana tena tsara ho an'ny famokarana fitaovam-pihinanana, fitaovana, vilany, kitay sy kesika. Izahay dia mandray anjara amin'ny fanomezana ny mpanjifanay amin'ny faribolan'ny alimo. Io karazana io dia manana kalitao faratampony ary tena ankasitrahana.
Dc / Cc 1050 1060 1100 3003 Aluminium Induction Disc Circle Prices
Aluminium Disc Description Fanodinana Kitapom-batana sy Fanodinana Mechanical Services Our Services 1. Hamaly ao anatin'ny 1 ora 2 izahay. Afaka manome 3 samples. Amboary ny sambo raha ilaina ny mpanjifa, ary misafidy ny vidiny kokoa ho an'ny mpanjifa. 4. Ampidino amin'ny mpanjifa ireo sary hosodoko, noho izany dia tsy mila mijery ny entana 5 ny mpanjifa. Aorian'ny mpanjifa mahazo ny entana, ny olana rehetra dia hiova ho an'ny mpanjifantsika isika. 6. Fanamarinana fanomezana ho an'ny mpanjifa, toy ny DNV, MTC, SGS, CCPIT 7. Fanaraha-maso ny antoko fahatelo amin'ny fangatahanao Ny fepetra rehetra na ny fanontaniana dia maniry ny manontany ahy, izaho dia ho ...
Ny fananana ny faribolan'ny alim-bary: Ny endriky ny faribolan'ny alimo ho an'ny vilany, sns., Ny kodiarana alim-bary tsy misy kofehy (na endrika boribory) dia mahatonga azy ireo ho tsara amin'ny fampiasana amin'ny tsenambola maromaro ao anatin'izany ny sehatry ny cookware, automotive and lighting etc: 1. Anisotropy ambany, izay manamora ny famolavolana lalina ny 2. Fiarovana mahery vaika 3. Hery sy hafanam-po hafahafa 4. Ny fahafahana mamirapiratra, rakotry ny PTFE (na hafa), anodized 5. Good reflectivity 6. Fiarovana mahery vaika amin'ny 7. Faharetany sy fahaverezan'ny fahasimbana Quick Details Grade: 1000 Series Tempera: O-H112 Karazana: Takelaka fampiharana: Boards Signatures Reflective, Road Furniture, Utensils etc Thickness: 0.2mm-5mm Width: 100mm-1360mm Surface Treatment: ...
Aluminum Circle Rolling / Aluminum Circle 1050 H12 For Pizza Pan
Taratasy ho an'ny antsipirihany Grade: 1000 Serivisy Tempoly: O-H112 Karazana: Coil Application: Aluminium composite Panel Thickness: 0.2mm amin'ny 10mm Width: 1000mm amin'ny 1800mm Fiatrehana ny surf: Coated Leggings na tsia: Volana tsy misy alika: Aluminium Aluminium 1060 Aluminium Disc for Kitchen Ware 1) Legge: 1050. 1060, 1100, 1070, 1200 2) Tempera: soft, 1 / 4 sarotra, 1 / 2 sarotra, sarotra, H12, H14 3) Thickness: 0.3mm amin'ny 6.0mm 4) 100mm amin'ny 1500m 5) / pot, fitaovana fampiasa amin'ny fampiasana simika fanaovan-tsakafo, kapila, tsy tapaka potika, fitaovam-pisakafoanana ary ny sisa. Aluminium kapila modely habeny Φ140mm Φ160, Φ170, Φ172mm, Φ180, Φ190, Φ200, Φ 204mm, Φ208, Φ280mm, Φ240, Φ252, Φ248, Φ260, Φ265, Φ268, Φ275, Φ270, Φ275, Φ210mm, Φ219mm, Φ215, Φ228, Φ230, Φ234, Φ240mm, Φ250mm, Φ260mm Φ290, Φ295, Φ300, Φ305, Φ310, Φ315, Φ320, Φ325, Φ335, Φ330mm, Φ340, Φ350mm, Φ360mm, Φ370mm, Φ380mm, Φ390mm, Φ395mm, Φ400mm Φ350, Φ355, Φ360, Φ370, Φ375, Φ380, Φ390, Φ395, Φ400, Φ405 Φ407, Φ410, Φ415, Φ420, Φ425, Φ430, Φ435, Φ440, Φ450, Φ460 ...